P3v4 များအတွက် Dassault စွန်ငှက်။ Altimeter အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
မေးခွန်း P3v4 များအတွက် Dassault စွန်ငှက်။ Altimeter အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
2 နှစ်ပေါင်း5months ago #758 by spilok
ငါအဘို့အစွန်ငှက်ကိုချစ် Prepar3dv4 ။ အရာအားလုံး altimeter မှလွဲ. အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီအတှကျပြင်ဆင်ချက်ရှိပါသလား?
2 နှစ်ပေါင်း5months ago #765 by superskullmaster
သင်နှင့်အတူအနည်းငယ်သည်းခံခြင်းရှိသည်ဖို့ရှိသည်သွားကြသည် P3D V4 ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ အဲဒီမှာသူက wont သော်လည်း fixed ရကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါ (ကယူဆအကြမ်းဖျင်းတူညီအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်) အလုပ်မတဲ့လေယာဉ်ကနေတစျဦးနှငျ့တ panel ကို config ကိုအတွက် gauge အစားထိုးကြိုးစားကြလိမ့်မယ်။
2 နှစ်ပေါင်း5months ago #766 by spilok
အရာအားလုံးကိုတစ်-install ပြန်လည်ပြီးနောက်ယခုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်အမှားများအတွက်ရလဒ်အကြှနျုပျ၏ပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့စမ်းသပ်ပုံရသည်။ re-install ပု altimeter အပါအဝင် fixed အရာအားလုံးရှိပါတယ်။